Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Switzerland oo Banaanbax Balaadhan Kuqabatay Magaalada Geneva.
Jaaliyada Switzerland oo Banaanbax Balaadhan Kuqabatay Magaalada Geneva.
Waxaa ka dhacay Xarunta Qaramada Midoobay (QM) ee Geneva banaanbax lagu diidanyahay heshiiska xaaraanta ah ee lagu dhacayo khayraadka Ogaadeenya. Jaaliyada S. Ogaadeenya ee Switzeland iyo ururka u dooda xuquuqda dadka Ogaadeenya ee Ogaden People’s Rights Organization loo yaqaano ayaa si wadajir ah uga qaybgalay kalfadhii 31aad ee UN-ta ee xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva lagu qabtay.
Galinkii hore xubnaha oo wadajira ayaa madasha shirka ka qaybiyay qoraal ka hadlaya isbaheeysiga xaaraanta ah ee Djibouti, Ethiopia iyo Shiinaha iyo dhibka uu u keenay mashruucani shacabka iyo deegaanka Ogaadeenya. Xubnaha ayaa la kulmay safiirada reer Galbeedka u jooga xarunta QM kalana hadlay in ay ku booriyaan wadamadooda in ay soo fara galiyaan dhibaatooyinka badan oo sadaxdan wadan ku hayaan umada Ogaadeenya. Kuna qasbaan Itoobiya in ay furto gobalka si loo qiimeeyo baaxada dhibka heeysta shacabka.
Galinkii dambe ayeey si wadajir ah labada urur kusoo gabagabeeyeen banaanbax ka dhacay xarunta QM horteeda. Xubnaha labada urur ee kaqayb galay shirkii UN-ta ayaa la kulmay soo dhawayn kuwii hore ka duwan iyadoo masuuliyiinta matalayay dawladaha qaar ee shirka joogay carabaabeen in arrintani tahay mid keenaysa in reer Galbeedku si ka duwan waayadii hore ugu soo jeesan doonaan arrinta Ogaadeenya.
Isbahaysigan ayaa loo arkaa mid umadii qayraadka lahayd la duudsiinayo iyadoo horey loogu hayay tacadiyo kala duwan ooy u dheer tahay in Itoobiya diidantahay in ay Ogaadeenka u furto hayadaha caalamiga ah baaritaanana la sameeyo xasuuqa aan kala joogsiga lahayn ee Ogadenya kasocda. Ka qaybgalkii shirka UN-ta ayaa ahaa mid waqti loo baahnaa kusoo aaday faa’iidooyin aan la qiyaasi karina lagala kulmay.